घरकि एकमात्र बुहारी म बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन! – List Khabar
Home / जीवनशैली / घरकि एकमात्र बुहारी म बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन!
घरकि एकमात्र बुहारी म बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन!
admin October 14, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 279 Views
‘छ्या दसैं पनि आयो है’ ल्यापटप झोलामा राख्दै प्रियाले भन्छे। ‘लौ किन छ्या नि? दसैं आउँदा खुसी लाग्या छैन तँलाई?’ अचम्म मान्दै सोध्छु।मतिर हेर्दै नहेरी झोलाबाट मोबाइल निकालेर समय हेर्छे अनि प्रिया बोल्छे- जति खुसी हुनु बिहे नहुञ्जेल भइयो, बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन मलाई।
हामी उसको अफिसबाट बाहिर निस्कियौं।प्रिया एक निजी संस्थामा जागिर गर्छे। उसको आजबाट दसैं बिदा भएको थियो। अफिस बिदा भएपछि दसैंको किनमेल गर्न सँगै जाने सल्लाह भएको थियो हाम्रो। त्यसैले म उसलाई लिन त्यहाँ गएकी थिएँ। उसको कुरा अनि निराश अनुहार देखेर किनमेल गर्न जाने मनस्थिति नै बनेन। ‘हिँड् जाऊँ त्यहाँ मिठ्ठो चटपटे पाउँछ, पहिले चटपटे खाऊँ अनि बजार जाउँला’ मैले उसको मुड फ्रेस बनाउने जमर्को गर्छु।
हुन त म खासै चटपटेको पारखी होइन तर सच्चसाथीको कर्तव्य निर्वाह गर्नु थियो।’दाइ, ६० को चटपटे बनाउनु ल, पिरो कम अमिलो ट्वाक्क’ मैले कुर्सी मिलाउँदै चटपटे अर्डर गर्छु। प्रियाले बल्ल मेरो आँखामा हेरेर बोल्न सुरू गर्छे-कहिलेकाहीँ त अफिसबाट छुट्टि भएपछि पनि यहीँ अफिसमै बसिरहुँ जस्तो लाग्छ। घरकाले त हामी अफिस आराम गर्न गएको जस्तो सोच्छन् कि क्याहो! अझ चाडवाड आएपछि त मेरो हालत के हुन्छ तँलाई थाहै होला।
उसको कुरामा सहमति जनाउँदै टाउको हल्लाउँछु। त्यसपछि उसले आफ्नो दुःखहरूको पोको बिस्तारै खोल्दै जान्छे। ‘मेरो घरको भव्य दसैं’, संयुक्त परिवारकी एकमात्र बुहारी म। घरमा जमघट हुन थालिसक्यो। काठमाडौंबाट कान्छो सासू-ससुरा छोराछोरीसहित आइसक्नुभएको छ, आफ्नो घरमा आउनै पर्‍यो दसैंमा।घरमा रमझम सुरू भएको छ। सासूले हजुरआमा(बुढी सासू)को स्याहार गर्दा अरु काम गर्न भ्याउनु हुँदैन। कान्छी सासू पाहुना पल्टेर यो ल्याऊ त बुहारी, त्यो गर त बुहारी भन्दा ठिक्क, ससुराहरू र श्रीमान ज्यूको म्यारिजको पत्ति जम्न सुरू भइसकेको छ, साथीभाइ बोलाएर।
छोराछोरीको टिम मोबाइल र ल्यापटपमा व्यस्त, खाना खान पनि बोलाँउदा समयमा आइदिन्नन्। हजुरआमालाई छुट्टै चोखो खाना बनाएर खुवाएपछि सासूले भान्साको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ। म्यारिज टिमहरूलाई छिनछिनमा चियापानीको व्यवस्था, बैठक कोठामै खाना अनि बेलुका स्न्याक्स तयार गरिदिनुपर्छ।
प्रिया र उनका श्रीमान समयमै माइत पुग्छन्। उता प्रियाका भाइ बुहारी पनि ठिक्क ससुराली हिँड्न लागेका हुन्छन्। ‘ल ल गइहाल, हामी आमाबुवासँगै टीका लगाइहाल्छौं’ भनेर प्रियाले भाइ बुहारीलाई बिदा गर्छे। यता पनि बाबुआमाले समयमै खाना खान पाउँछन्। सबै जना खाना खाएर पारिपट्टि बुढा हजुरबुवाकोमा टीका थाप्न जान्छन्। हजुरबुवाले बृद्धभत्ताको थैलीबाट दक्षिणा निकाल्दै खाममा राख्न लागेको देखेर प्रियाका श्रीमानले भन्छन्,’हजुरबुवा दक्षिणा होइन आशीर्वाद टन्न दिनुस्,जमरा र टीका लगाइदिनुस् यही नै हाम्रो लागि दक्षिणाभन्दा अमूल्य रहनेछ।’ सबैले हो मा हो मिलाउँछन्।
Previous जातिय भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै विनयजंग बस्नेतले गरे पूजा विश्वकर्मासँग विवाह
Next सिंगापुरले माग्यो ६ वर्षपछि नेपाली कामदार, खर्च ५० हजार, तलब दुई लाख ||